KINGUP SPC mpanamboatra trano - ZD manam-pahaizana zoro
Home > KINGUP SPC mpanamboatra trano
Ahitsio: Denny　2020-03-07　Mobile
KINGUP dia orinasa mpanamboatra gorodona mampiditra ny R & D, famolavolana, famokarana, varotra, fametrahana ary serivisy ara-teknikan'ny sehatra SPC sy gorodona PVC. Nifandray tamin'ny tenin'ny orinasa ny "kalitao voalohany, ny tsy fivadihana ho rohy fototra, ny mpanjifa voalohany", ny fisolokiana ny filozofianan'ny raharaham-barotra "fitrandrahana sy fanavaozana, fanamafisana sy fandresena", manantitrantitra ny hanome ny mpanjifa vokatra tsara tarehy, serivisy ara-teknika matihanina ary vonona ny ho tonga Ny mpanamboatra tsara indrindra eo amin'ny sehatry ny arofan'ny SPC ao an-trano sy any ivelany.
Manana orinasa 1, rihana vita amin'ny 9 izahay, izay afaka mamokatra gorodona metatra toradroa isaky ny andro.Vita ao anatin'ny 15 andro manomboka ny fandrindrana mankany amin'ny fandefasana izany.Ny gorodona dia manana fenitra fanaraha-maso kalitao tsara alohan'ny handaozan'ny orinasa azy mba hahazoana antoka ny kalitao avo indrindra amin'ny vokatra. tsara. Ny orinasa dia manasa koa ny matihanina avy any an-trano sy any ivelany tsindraindray hanome fotoana sy torolàlana teknika ho an'ny asa fanodinana sy mpiasa mpiasa teknika. Ny fitaovam-pamokarana dia hanamboatra ny marika isan-karazany ihany koa na hanolo ny ampahany amin'ny fotoana hahatratrarana ny kalitao tsara indrindra sy ny kalitaon'ny vokatra. Ampifandraisinay ny zava-dehibe amin'ny rafitra kalitao.Ny gorodoron'ny orinasa dia mifanaraka amin'ny rafi-pitantanana kalitaona ISO90000: 2000 ary ny rafitra fitantanana tontolo iainana ISO141001, ary nahazo ny fanamarinana CE.
Azontsika atao ihany koa ny manome ohatra maimaimpoana ho an'ny fanombanana anao, ary alohan'ny famokarana dia halefanay ihany koa ny taratasy momba ny famokarana ho fanamafisana anao .. Mandritra ny fizotran'ny famokarana, ny dingana tsirairay dia voafehy tsara amin'ny ekipa mpitantana ny kalitao mba hampihenana ny haben'ny vokatra. Hadisoana ny mamokatra vokatra momba ny kalitao ho afa-po aminao
Mba ahafahana mameno ny filàn'ny mpanjifa samihafa dia mbola manohy famandrihana ara-teknolojia sy fanavaozana eo amin'ny tany SPC ihany ny KingUP. Amin'izao fotoana izao, ny faritra lehibe ampiasain'ny SPC dia ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, hotely, trano fisakafoanana ary toeran-kafa. Ho valin'ny toetran'ireny faritra fampiasana sy ilain'ny mpanjifa ireny, iUPUP dia namorona rihana fampisehoana isan-karazany toy ny «anti-setroka, anti-scratch, anti-stain» hihaona ireo mpanjifa Filàna fampiasana skenario. Ho fanampin'ny fahatapahana ara-batana ara-batana, ireo mpanamboatra KINGUP dia manohy fanavaozana hatrany amin'ny haingon-trano gorodona. Namolavola vokatra SPC isan-karazany izahay miaraka amin'ny makiazy, modely sy loko isan-karazany, ary koa ny fomba fampivoriana isan-karazany, toy ny famafazana ny herringbone root, ny fanjonoana trondro, sns, ahafahana manome ny tsirairay sy ny aestetika ny mpanjifa samihafa.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny indostrian'ny gorodona manontolo, ny mpanamboatra KINGUP dia manaiky ny hanomezana ny mpanjifa sokajy maro samihafa sy fitaovana samihafa amin'ny gorodona samihafa. Amin'ny sehatra ara-barotra, ny fampiasana ireo fitaovana isan-karazany na haingon-tsary samy hafa ao amin'io sokajy io ihany no ho votoatin'ny fikarohana ataonay amin'ny ho avy.
Amin'ny tontolo tsena izay ifaninan'ireo marika lehibe, ny mpanamboatra KINGUP dia hitazona hatrany ny tanjony sy ny andraikiny voalohany-hanomezana ny mpanjifa vokatra vaovao tsara kalitao ho an'ny tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao, ny KingUP R&D Centre dia natokana ihany koa amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny araben'ny SPC.Tsy vitan'ny hoe manadihady ny angon-drakitra lehibe momba ny varotra momba ny loko ny fisievany, mba hahatratrarana ny fiovan'ny sarimihetsika miloko loko lafo vidy indrindra, fa avy amin'ny fomba fiasa sy ny fampisehoana ihany koa, dia mitohy ny famolavolana azy io. Ny vokatra amin'ny gorodona vaovao mitarika ny fironana tsena dia mifanena amin'ny filàn'ny vondrona mpanjifa samihafa sy ny fampiasana manokana. Fidio ny KingUP mba hahatonga ny fiainanao ho maro loko kokoa!
KINGUP SPC mpanamboatra trano Ny atiny mifandraika
Ny tany SPC dia miorina amin'ny calcium-poly ary polyvinyl chloride stabilizer amin'ny ampahany sasantsasany mba hamolavola fitaovana famenonana mitambatra. Ny gorodona SPC dia mampiasa vovoka kalsio...
Inona no hatao raha bobongolo ny gorodona?